Rotor Cooker (RT) mpanamboatra | Yinrich
Home > Products > Fitaovana an-dakozia > Rotor Cooker (rt)
dia rafitra fandrahoan-tsakafo mitohy izay ampiasaina hamokarana substrates vatomamy caramel. Ity karazan-tsakafo tsy misy rotor ity dia masaka ao anaty vaksina maharitra, matetika no ampiasaina hamokarana karamelà ronono fotsy.
Yinrich dia mpanamboatra rotor mpangataka matihanina sy mpamatsy miaraka amina ekipa manana talenta matihanina, fitaovana famokarana mandroso, ary serivisy aorian'ny fivarotana tonga lafatra. Ny mpahandro ny rotor novokarin'i Yinrich sy ny rafi-pandehanany fotoana fohy tsy manam-paharoa dia afaka mahandro vatomamy mazava tsara amin'ny fotoana fohy indrindra, ka mifehy tsara ireo vatomamy. Izany dia mahatonga ny vokatra mpamokatra rotor an'i Yinrich mivarotra tsara eny an-tsena.
YINRICH dia manolotra rafi-pisakafoanana maharitra (RT) ho an'ny mpanjifantsika, mety ho an'ny be sy ny be mora tohina, toy ny vatomamy henjana, tavo, fondant milky, masaka misy voankazo, ary karaoty karama fotsy. Izy io dia torontoronina, amin'ny fomba manokana, mba handrahoana sakafo haingana sy malefaka, na eo am-pivoahana, avy amin'ireo be ronono. Fitaovana feno miaraka amin'ny vilany fandrahoan-tsambo, efitrano etona ary paompy manafaka.